ऋषि धमलामाथि एमालेको यस्तो आक्रोष ! प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा माफि माग्नुपर्ने केशब बडालको माग « रिपोर्टर्स नेपाल
ऋषि धमलामाथि एमालेको यस्तो आक्रोष ! प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा माफि माग्नुपर्ने केशब बडालको माग
भदौ १०, काठमाण्डौ । संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष प्रतिबद्धता जनाउनु दुर्भाग्य भएको नेकपा एमालेका नेता केशब बडालले बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता बडालले अर्को पटक संविधान संशोधन पारित गर्छु भनेर भन्नु अत्यन्त आपत्तिजनक भएको बडालको तर्क छ ।
संसदले पारित गर्न नसकेको संविधान संशोधन विधेयकलाई पुनः पास गराउँछु भन्नु जरुरी नरहेको भन्दै नेता बडालले विधेयक फेल हुँदा सबै नेपाली जनता खुशी भएको दाबी गरे ।
नेपालको संविधानको विषयमा भारतको असहमति अझै छ नि भन्ने धमलाको प्रश्नको जवाफ दिदै नेता बडालले भने, “भारतको संविधान कहाँ के गर्ने भनेर हामीले भनेका छैनाँै । त्यसैगरी नेपालको संविधानको विषयमा भारतले केही पनि भन्नु जरुरी छैन ।”
संविधान संशोधनमा राजपासहित सबै दल सहभागि भएको उल्लेख गर्दै नेता बडालले अब कोही पनि संविधानप्रति असन्तुष्टी नभएको जिकिर गरे । जित हार सबैले स्विकार गरेको ठहर भएको अवस्थामा भारतले नेपालको संविधानमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्नु राम्रो नभएको बताए । “ तपाईको भावना अनुसार अर्को चुनावमा दुई तिहाई ल्याएर संविधान संशोधन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले मोदीसमक्ष भन्नु राष्ट्रहित विपरित हो ।” बडालले भने ।
संविधान संशोधन गराउँछु भनेर भनेको अभिव्यक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालो संसदमा माफी माग्नुपर्ने तर्क समेत बडालले गरे । “सार्वभौम संसदको अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।” बडालले भने ।
यस विषयमा एमालले संसद अवरुद्ध गर्छ भन्ने धमलाको प्रश्नमा देउवाले संसदमा माफी माग्नुपर्ने दोहो¥याए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भारत भ्रमणको बेलामा पनि संविधान संशोधनको कुरा भएको स्मरण गराउँदै धमलाले प्रश्न गरेपछि बडालले आक्रोषि हँदै भने, “ओलीले संविधान संशाधनको विषयमा कुरा गर्नुभएको थिएन । तपाई बनावटी कुरा नगर्नुस् । आम जनताको बिचमा झुटो कुरा नलैजानुस् । केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रहित विपरित कुनै कुरा गर्नुभएको छैन ।”
ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले चारबुँदे पत्र भारतलाई बुझाएको स्मरण धमलाले गराएपछि बडालले भने, “कहाँ ककसले केके ग¥यो, त्यस्ता जाबा कुरा नल्याउनुस् । त्यो कुरा कमल थापालाई सोध्नुस् । नेकपा एमालेलाई थाहा छैन ।”
“तपाईको भनाई के ? नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको बेगर नेपालले सास फेर्न पनि हुन्न भन्ने हो ?” बडालले प्रतिप्रश्न गरे । जवाफमा धमलाले तपाईभन्दा म बढि राष्ट्रवादी छु भनेपछि बडालले धमलालाई भने, “तपाई अशोक मेहेताको पछाडि नलाग्नुस् ।”
बडालभन्दा अघि नेपाली बहसमा मेहेताले धमलासँग अन्तरवार्ता गरेका थिए । त्यो अन्तरवार्ता सुन्नुभयो भनेर धमलाले प्रश्न गर्दा बडालले केही दिन अघिको कुराकानी सुनेको तर आजको भने नसुनेको बताए ।
कुराकानीको क्रममा बडालले धमलालाई राष्ट्रवादी व्यक्ति भन्दै धमला विगतदेखि नै राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको स्मरण गरे ।
बडालले मेहेताको भनाई बेठिक र नेपाल अनुकुल नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
भारतले गरेको गलत कामको आलोचना गर्दा भारतविरोधी भन्न नमिल्ने भन्दै बडालले आफ्नो पार्टी भारत विरोधी नभएको स्पष्ट पारे । छिमेकी देश भारतको विरुद्धमा एमालेले सोच्न पनि नसक्ने बताउँदै बडालले गलत कामको भने विरोध गर्नुपर्ने बताए । भारतले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको नाममा पेल्न नपाउने भन्दै नेपालको अहित हुने काम नगर्न भारतलाई आग्रह गरे ।